माधव नेपालले भने : केपीको कित्ता एकातिर छ, क्रान्ति’कारी कित्ता अर्कोतिर ! - Thulo khabar
माधव नेपालले भने : केपीको कित्ता एकातिर छ, क्रान्ति’कारी कित्ता अर्कोतिर !
काठमाडौं : प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठनको नयाँ अभियान सुरु भएको बताएका छन्।
मंगलबार चन्द्रागिरिमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपालले केपी कित्ता एकातिर र क्रान्तिकारी कित्ता अर्कोतिर भएको टिप्पणी गरेका हुन्। पुनर्गठित कम्युनिस्ट पार्टीले अन्य वामपन्थी पार्टीहरूसँग आगामी चुनावमा तालमेल गर्ने उल्लेख गर्दै
उनले लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रियता र संघीयताको रक्षाका लागि अघि बढ्ने बताए। नेता नेपालले वार्तामा जुटेका र वार्ताका लागि भूमिका खेल्ने नेताहरूसँग भविष्यमा पनि एकताको प्रयास जारी रहने बताए। चाहे वार्तामा जुट्नुभएका कमरेडहरू हुनुहोस्, चाहे वार्तामा नजुटेर पनि
भूमिका खेल्नुभएका कमरेडहरू हुनुहोस् । सबै मिलेर हामी एकताबद्ध भएर जाने कोसिसमा छौँ । अब केपीको कित्ता एकातिर भएको छ र अर्को क्रान्तिकारी कित्ता अर्कोतिर भएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको नयाँ अभियान सुरु भएको छ । यो पुनर्गठित कम्युनिस्ट पार्टीले अब अरू वामपन्थी पार्टीहरूसँग भोलि चुनावी तालमेल पनि गर्नेछ,’ उनले भने।
अष्टलक्ष्मी शाक्य आफूसँगको सल्लाहमा नै बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री बनेको प्रस्ट पार्दै नेपालले शाक्यले कुन पार्टी रोज्छिन् भन्ने आधारमा नै बागमती प्रदेश सरकारलाई आफूहरूले कसरी हेर्ने भन्ने तय हुने बताए।